Read horn of Afrika oo in ka badan 890 Ari ah ku wareejisay guddiga gurmadka Puntland (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 30, 2013 4:09 b 0
Garoowe, December 30, 2013 – Hay?adda read horn of Africa ayaa maanta xoolo ku wareejisay guddiga gurmadka masiibadii Puntland, deeqda ayaa la siin doonaa dadkii ku xoolo beelay masiibadii ka dhacday dhulka xeebaha ah.
897 neef oo adhi ah ayaa hay?addu si rasmi ah ugu wareejisay guddiga gurmadka masiibada, si loogu qaybiyo dadka.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Gen. Cabdullahi Axmed Jaamac Ilkajiir ayaa ka qayb-galay munaasabada xoolaha lagu wareejinayey, isagoo u mahadceliyey hay?adda read horn of Afrika ee xoolaha bixisay.
Mudane Ilkajiir oo metelayey guddiga ayaa xaqiijiyey inay guddiga gurmadku la wareegeen xoolaha deeqda ah la gaarsiinayo dadka aan xoolaha haysan, wuxuu xusay in qaybin doonaan gargaarka ka yimid bulshooyinka Minnesota iyo Cyclone Family Resseltment.
Puntland waxay shaacisay in laga baxay xaaladii deg dega ahayd balse ay waxaa weli socda gurmad kala duwan oo xagga dowladda iyo xagga culimada ah oo la gaarsiinayo dadkii masiibadu sida ba?an u saamaysay.
Dhegeyso: – Wasiirka arrimaha gudaha Gen. Cabdulaahi Axmed Jaamac Ilkajiir oo hadlaya
Asaminew ?xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya waxaa xoojinaya baarlamanka iyo shacabka labada dal?